( Breaking News) ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းကြီး လာနေပြီ… နယူးယောက်က အမြန်ထွက်ကြပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » ( Breaking News) ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းကြီး လာနေပြီ… နယူးယောက်က အမြန်ထွက်ကြပါ။
( Breaking News) ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းကြီး လာနေပြီ… နယူးယောက်က အမြန်ထွက်ကြပါ။
Posted by ကိုကိုလူဆိုး on Aug 27, 2011 in U.S. News | 23 comments
share :// mutdfan.com
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ တောင်ဘက် ကာရစ်ဘီယံ ကျွန်းစုထဲရှိ ဘဟားမားကျွန်း၌ တနာရီလျင် လေတိုက်နှုန်း ၁၁၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် ၀င်ရောက် တိုက်ခတ်လျက် ရှိနေသော ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း အိုင်ရင်းသည် စနေနေ့ညမှ စတင်ပြီး မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်သို့ အရင်ဆုံး စတင် ၀င်ရောက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၏ ကမ်းခြေတလျှောက်၌ ဒေသခံများ နှင့် နွေရာသီ အပန်းဖြေခရီး ရောက်ရှိနေသူများကို ဒေသဆိုင်ကာ ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များက အလျင်အမြန် ရွှေ့ပြောင်းပေးလျက် ရှိနေသည်။
ပြည်ထောင်စု အရေး အခြေအနေများ စီမံခန့်ခွဲရေး အေဂျင်စီရဲ့ အကြီးအကဲ Craig Fugate က “ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း အိုင်ရင်းဟာ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်ကိုသာ တိုက်ခတ်မှာ မဟုတ်ဘဲ ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုလည်း ၀င်ရောက် မွှေနှောက် တိုက်ခတ်မယ့် မုန်တိုင်းအမျိုးအစား ဖြစ်တယ်” ဟု သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသား ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း စောင့်ကြည့်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး Bill Read ကလည်း ဗာဂျီးနီးယား နှင့် မေရီလင်းပြည်နယ် ၂ ခုအနီး ကိုလံဘီယာခရိုင်အတွင်း ပါဝင်နေသော ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော်ကိုပါ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း အိုင်ရင်း တိုက်ရိုက် ကျရောက်နိုင်ကြောင်း သတိပေးချက်များ ပြုလုပ်ထားပြီး ယနေ့ ထုတ် ဒေးလီးမေးလ် သတင်းစာကမူ “ဟာရီကိန်းကြီး လာနေပြီ နယူးယောက်မှ အမြန်ထွက်သွားကြပါ” ဟု နိုးဆော်ရေးသား ထားသည်။
ကမ်းရိုးတမ်း ဒေသရှိ ရပ်ကွက် ငါးခုမှ ပြည်သူများ မဖြစ်မနေ နေရပ်ရင်းမှ အမြန်ထွက်ခွါကြရန် နယူးယောက် မြို့တော်ဝန်က ပထမအကြိမ် အမိန့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ စနေနေ့ နံနက်စောစောတွင် ကုန်းတွင်းပိုင်း ၀င်ရောက်မည့် ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားကလည်း “သမိုင်းတစ်ခွင်မှာ မကြုံစဖူး ထူးတဲ့၊ သဘာဝ ဘေးဒဏ်ကြီး ရောက်လာတော့မယ်လို့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကတော့ ညွန်ပြနေပါပြီ။ လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ဟာရီကိန်း အိုင်ရင်းရဲ့ ဒဏ်ကို ခံရမလားဆိုတာ သေချာမသိပေမယ့် အမေရိကန် ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားပါတယ်။ ရေ၊ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရေးအပေါ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားကြပါ။ အရေးပေါ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကို နားစွံ့ပေးပါ” ဟု အမေရိကန် ပြည်သူများသို့ အိုဘားများက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေသတွင်းရှိ အမေရိကန် လေကြောင်းလိုင်းများ၊ ရထားလိုင်းများ၏ ခရီးစဉ်များ၊ ရေကြောင်း ခရီးစဉ်များကိုလည်း စနေနေ့ နေ့လည်မှ စတင် ရပ်ဆိုင်းတော့မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း အိုင်ရင်းသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသမိုင်းတစ်လျောက် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း အပြင်းထန်ဆုံး မုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း မိုးလေ၀သ ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားကြသည်။
Up we go: Land Crewman Christopher Bird directs as they pullasail boat out of the water at Martha’s Vineyard Shipyard in Vineyard Haven, Massachusetts, as Hurricane Irene moves up the US East Coast
Concerns: President Obama said that Hurricane Irene threatens to be ‘historic’, as he spoke from his vacation home on Blue Heron Farm in Chilmark, Martha’s Vineyard, Massachusetts
Battered: A boat hits against the seawall as bands of rain and wind from Hurricane Irene hit Nassau, on New Providence Island in the Bahamas.
Drenched: Hurricane Irene has continued to strengthen as it has raged over the Caribbe
ဘေးကင်းပါစေ အန္တရာယ်ဆိုးကြီးကနေ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ကမ္ဘာမြေကြီး စိတ်တိုနေတယ် ထင်တယ်
ငလျင်လှုပ်လိုက် မိုးရွာလိုက် မုန်တိုင်းတိုက်လိုက်..
အခုမှ ဒီမှာ မိုးတွေ ဆဲရုံ ရှိသေးတယ်။
ဒီကို အဖျား မခပ်ပါစေနဲ့.. ကျတော်တို့ လယ်တွေ ပျက်ပေါင်းများပြီဗျာ..
ယ္ခုကျရောက်မည့် အန္တရာယ်ဆိုးကြီး မှ လွတ်ကင်းကြပါစေ…………..
မိုးနတ်မင်းကြီး ရေ ကြည့်နေတော့မှာလား………။
ကမ္ဘာမြေကြီး စိတ်တိုတာမဟုတ်ပါဘူးဗျို့…။ နာမကျန်းဖြစ်နေတာ………..
ဆိုတဲ့ ကြာဖူးတဲ့ တဘောင်လိုများ ဖြစ်နေတာလား။
ကြားဖူးရင်လည်း ဆက်ရှင်းပါအုန်း အခုမှ ကြားဖူးလို့
ဒီဆိုဒ်မှာ မြန်မာပြည်ကသတင်းဆိုရင် ချက်ချင်းသိအောင်တင်ပေးကြတယ်၊သူကြီးတို့ အမေရိကားကသတင်းတွေက ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေတာလည်းဆိုတာသိချင်ပါတယ်။အဲဒီ ဟာရီကိန်းမလာခင်က မြေငလျင်လှုပ်သွားသေးတယ်၊သူကြီးတို့ဆီကသတင်းတွေကနောက်ကျနေတယ်နော်…ဘာမှမပူပါနဲ..သူကြီးတို့ဆီမှာက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မူတွေအများကြီးလုပ်ပြီးသွားပါပြီ….ဟုပ်တယ်နော်….
ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရရင်သိပ်ကောင်းမှာဘဲနော် ..ဒီတခါသူဂျီးအလှည့်။ VOA ကတောင်အသံလွှင့်
အစီအစဉ်အချို့ပြောင်းလိုက်ရကြောင်းအခုဘဲကြေညာသွားတယ်။ အဂါင်္နေ့က ၀ါရှင်တန်မှာလှုပ်တဲ့
နယူးယောက်နဲ့.. လေ့ာစ်အိန်ဂျလိစ်က.. မိုင် ၂၅၀၀လောက်ဝေးတယ်..။
ထာဝရဘုရားသခင်ကို ယုံတဲ့သူတွေခမျာ.. ဆုတောင်းပွဲကြီးတွေ . လုပ်တာမတွေ့ရဘူး..။
ခရစ်ယန်တွေရဲ့.. ဂါထာတွေ.. ပရိတ်တွေဘာတွေလည်း.. ရွတ်နေတာ.. မတွေ့မကြားမိပါဘူး..။
လက်တွေ့ကျကျ.. တံခါးတွေ တခါးတွေသစ်ပြားနဲ့ပိတ်.. အပင်တွေဖြတ်ချ..။ အစားအသောက်တွေစု.. မြေတွေဖို့..။ လူတွေနေရာရွေ့လုပ်နေကြတာပဲ..။
တနိုင်ငံလုံးက.. မုန်တိုင်းပြီးရင်.အဲဒီဒေသကို.. ပြန်လည်ထူထောင်ဖြည့်စီးပေးဖို့.. ပြင်ထားကြတာပဲ.။
ယူအက်စ်.အစိုးရကလည်း.. သေသေချာချာ ပြင်ဆင်လုပ်ပေးမှာပါ..။ သတင်းမှာ.. အဲဒီအကြောင်းချည်းပဲ..ပြနေတာ.။ လိုတာထက်တောင်ပိုတယ်…။
အဲဒီဒေသတွေမှာ.. မြန်မာတွေ.. သောင်းချီနေကြပါတယ်..။
“”ထာဝရဘုရားသခင်ကို ယုံတဲ့သူတွေခမျာ.. ဆုတောင်းပွဲကြီးတွေ . လုပ်တာမတွေ့ရဘူး..။
ခရစ်ယန်တွေရဲ့.. ဂါထာတွေ.. ပရိတ်တွေဘာတွေလည်း.. ရွတ်နေတာ.. မတွေ့မကြားမိပါဘူး..။””
သူကြီးရေ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာမှ ဆုတောင်းကြတာကိုပြောမယ်ဆိုရင် မဟာဇနက္က ဘုရားလောင်းကိုဘဲဥပမာပေးရပါလိမ့်မယ်။သူ့ ထုံးကိုနှလုံးမူကြတာပေါ့။အမေရိကားမှာ လို post knowledge countries တွေက ထာဝရဘုရားသခင်ပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုကို ဝေဖန်ဖို့ ရာ မသင့်ဘူးနဲ့ တူပါတယ်။အကြံပြုရုံသက်သက်ပါနော်
အဲဒီနေရာမှာ ကိုယ် ရှိနေခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်း တစ်ယောက်ယောက်ရှိနေခဲ့ရင် ဆိုတဲ့အတွေး
လူသားများ ခလုတ်မထိ ဆူးမငြိ ရောဂါဘယ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ…။
အစိုးရကတော့ တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်း အဆိုးဆုံးအခြေအနေကို ချပြထားတာလေ။ မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး လေညှင်းထွက်နေကြလို့ ကက်ထရီးနားမုန်တိုင်းလို ဖြစ်သွားရင် တသီကြီးပြုတ်မှာကိုး…။ အခုအချိန်အထိတော့ နယူးယောက်မြို့အတွင်းဖက်မှာ မိုးသည်းထန်နေတာကလွဲလို့ အေးဆေးပါ။ မနက်ဖန် တနင်္ဂနွေမှာတော့ ပိုဆိုးမယ်ပြောတယ်။ နယူးယောက် ကမ်းရိုးတန်းဖက်နေရာတွေသာ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ မိုးရွာတာလည်း တကယ်တော့ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး…။ လေတကယ်တိုက်ရင် လျှပ်စစ်တာဝါတိုင်တွေလဲလို့ မီးပျက်နိုင်တယ်၊ ဂက်စ်နဲ့ ရေက တလိုင်းစီသွားလို့ မီးပျက်တောင် အရင်ကလည်း ပြသနာကြီးကြီးမားမား မရှိခဲ့ပါဘူး။ အလွန်ဆုံး ရေပူမချိုးရရုံပေါ့..။
ကိုကြောင် ခန့်မှန်းသလို ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေရတော့မှာ၊ ဒီနိုင်ငံကနဲ့စာရင် အဲဒီမှာက ပိုပီး အကာ
အကွယ် အစီအရင် ကောင်းမှာပါ၊ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ကြပါစေဗျာ။
ဘုရားဟောတရားအရ ဆုတ်ကပ်ကြီးမှာ လူတွေဟာ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာန်မာနတရားတွေများပြားပြီး လောကပါလတရားတွေပျက်ယွင်းလာတာနဲ့အမျှ ကမ္ဘာကြီးမှာ သူ့ထက်သူဆိုးတဲ့ ကပ်ဘေးတွေ ကျရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ နောက်လဲထပ်လာပါဦးမယ်။ မလာစေချင်ရင်တော့ တကမ္ဘာလုံးလောကပါလတရားတွေ ယုံကြည်စွာကျင့်သုံးပြီး အကုသိုလ်တရားတွေ ရှောင်ရှားနိုင်မှသာလျှင် လွတ်နိုင်ပါမယ်။ အကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့် အကုသိုလ်အကျိုးပေးနေချိန်မှာတော့ ဆုတောင်းယုံဖြင့်လွတ်နိုင်ရန်မလွယ်ပါ။
မပူနဲ့ မြန်မာပြည်လည်းဒီနှစ်မိုးပိုနိုင်တယ်…တဲ့ ၊
(ကမ္ဘာလုံးလောကပါလတရားတွေ ယုံကြည်စွာကျင့်သုံးပြီး အကုသိုလ်တရားတွေ ရှောင်ရှားနိုင်မှသာလျှင် လွတ်နိုင်ပါမယ်။ အကုသိုလ်အကြောင်းကြောင့် ..)
““အမေရိကန် ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားပါတယ်။ ရေ၊ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရေးအပေါ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားကြပါ။ အရေးပေါ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကို နားစွံ့ပေးပါ” ဟု အမေရိကန် ပြည်သူများသို့ အိုဘားများက ပြောကြားခဲ့သည်။””
အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့. ကျွန်မတို့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ များကွာလိုက်တာနော်။
မုန့်များများဝယ်ပြီး ဘေးမှာချထားတယ်။ရေကြီးလာရင် ရေကူးရင်းမုန့်စားနိုင်အောင်လို့။ဟီး။
သူတို့ဆီမှာ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြသလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ အတုယူရမယ်ဗျာ…
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ဘာတစ်ခုမှ မကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့လို့
နောက်ဆက်တွဲလေးတွေလဲ တင်ပြပေးပါအုံး….. ကျေးဇူးတင်လျှက်။
တားဆီးလို့မရတာတော့အမှန်ပဲထင်ပါတယ်။။။။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီက အဲ့လိုကြိုသိရပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်နိုင်တာကိုက ကျွန်တေ်ာတို့ထက်သာပါတယ်။။။ လွတ်မြောက်ပါစေ….